Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo bulshada la qeybsaday farxadda Ciidul Adxa | Saadaal Media
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo bulshada la qeybsaday farxadda Ciidul Adxa
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Madaxtooyada Dowlada Goboleedka Koonfur Galbed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed(Laftagareen) madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa loogu hambalyeyeye shacabka deegaanada Koonfur Galbeed,isagoo sidoo akle shacabka kalen ee Soomaaliyeedna u rajeeyay bash bash iyo barwaaqo in ay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa.
Cabdicasiis Xasan Maxamed(Laftagareen) madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo farxadda ciida la wadaagay shacabka Koonfur galbeed ayaa muujiyay in loo baahan yahay in bulshada kuwoodi danyerta ah loo gar gaaro,wuxuu sidoo kale shacabku ku booriyay wada shaqeynta hay’adaha amaanka iyo shacabka,si loogu guuleysto adkeynta amniga deeganaad Koonfur Galbeed.
“Waxaan rabaa in muslimiinta aan halkan hambalyo halkan ugu diro,waxaan leeyahay hambalyo meelkasto oo aad joogtaan, gaar ahaan umadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo shacabka Koonfur Galbeed,dadka ha is cafiyaan,xaafadaha la la isbooqdo,waxaan leeyahay meelkasta oo aad joogtaan in cibaadada uu ilaahay inaga aqbalo,umadduna ilaahay quluubtooda isku soo dumo,waad mahadsantihiin”. Ayuu yiri Madaxweyne (Laftagareen).
Ugu dambeyntii Waxa sidoo kale Ciidda Carrafo uu u diray Guud ahaan Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed, kuwa dowlada goboleedka Koonfur Galbeed, wuxuuna u rajeeyey in in horumar iyo barwaaqo ilaahay uu ku gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa kamid ahayd magaalooyinka loogu dabaal degayo maallinta koowaad ee ciidul adxa,waxaana madaxda Koonfur Galbeed ay salaada ciida kula dukadeen Baydhabo shacab iyo mas’uuliyiin kaladuwan.